Esi sikhulu, esingaphantsi kwesinyithi isetyenti isetyenzisiwe "sikhanyisa kwaye side" kunye nesisindo esincitshisiweyo kunye nezakhiwo ezinamandla. Umgama kunye nokuchaneka kunyukisiwe kwi-off hits. Yona yedwa iyiluncedo kwiimeko ezahlukeneyo ze-turf.
Ekupheleni kweNew Black Pearl (kwakhona ifumaneka ngeT Satin Chrome ekupheleni)
Ukugqithisa ubunzima bobunzima bobukhulu, kodwa izitya ze-shaft / clubhead zihambelana kakuhle kwaye zigcina zivakalelwa
Abagadi begalofu kufuneka baphinde balinganise ubude kwiibhentshi zabo zesebe
Izixhobo zeCleveland CG16 ziza ku-3-PW ukusetha ukucwangciswa; I-CG16 yokutyelela ityekele iyafumaneka (savavanywa i-CG16 ejwayelekile).
Sifake sivivinywe sibe ne-steel shafts kunye ne-Black Pearl. Iifomfa zegraphite kunye ne-Satin Chrome iphelile kwakhona.
Ubuso beLerer Milled ne-Tour Zip groove buyekezela ukusuka kuyo nayiphi na imeko.
Inkulu, iqhosha elincinci lisiza ukuncedisa umgama kwimishishithi.
Ubunzima beqela lobungakanani bukhanya ngokubanzi ngokuthelekiswa neentsimbi zangaphambili zeCleveland, kunye neengqayi zincinci. Leyo yindlela "eyilwa edelele kwaye ilula" apho uCleveland ibhekisela kuyo.
I-Gapping ihambelana nokuseta.
I-MSRP ngexesha lokuqaliswa kwakuyi-$ 699 ngemirhubhe yensimbi kunye ne-799 yee-shak shafts.
Ukuhlaziywa: iCleveland CG16 Irons
"I-Cleveland Rocks!" - okanye into enjalo-yinto yokumemeza evelele kwiindawo ezininzi zomculo. Ewe, kuthekani ngegolfu? Ewe, iCleveland iGulf iphume ngetsimbi esekelwe ukuba le ngcamango yolu vavanyo iphinda ikhuphe iindonga.
Kuthiwani malunga neentonga ezithandekayo kangaka? Ukuqala, ukubukeka - ngokugqibezela kweperile emnyama - ekhokelela ubunjani beli xolo. Umkhulu, onqambileyo umva ubuye unakekele ukuxolelwa kwimishishini. Kuthiwani malunga neengcingo eziqinileyo kunye neengqayi ezikhanyayo? Ubuso obunomlenze obubukeka obunjenge-laser obubukeka ngathi bukwazi ukutsala ilitye; phezulu; ngokubanzi, ukuxolela yedwa; ubunzima bomhlaba wonke.
Umgama, ulawulo ... yea! Ngaba akuyiyo loo nto iinqwelo ezifunekayo?
Into enomdla kakhulu malunga nale setonti yeenqwelwana kukuba i-Cleveland's lineage ibandakanya nzima kakhulu ukubetha izitoni zomdlali we-tour-caliber; okanye ukuphucula umdlalo ongeyinto elula kakhulu emehlweni. Kodwa i-Cleveland CG16 irons idibanisa ukubukeka nokuvakalelwa kweqela lomdlali ongcono ngokukhululeka kunye nokusebenza kwentsimbi yokuphucula intsimbi.
I-middle-flexpoint, i-85-gram "I-Cleveland Traction" ityhidi yensimbi inikeza amandla aphefumulayo ukuxhasa ukuzivala ngokukhawuleza kuyo yonke into. UCleveland uye wandisa ama-shafts, kwakhona, kodwa ngexabiso elincinane. Isitokisi 7-isinyithi i-quarter-inch ubudala ngaphezu kwexesha langoku ubude. Ubunzima nobude beziva nje kum.
Ndiyifumene nento endiyibonayo ukuba uphuculo lwangempela kwi-ballstriking. Ingaba yi-golfer okanye iiklabhu? Ngokuqhelekileyo nganye yodwa, kodwa kwimeko yeCG16 Ndandicinga ukuba uCleveland uye wanikela isiqinisekiso esiphefumlelweyo ekubukeleni nasekuhambisweni ngeteknoloji. Isiphumo sasiyi-shots ezithe zaphakama phezulu kwaye zide - zide okanye zide kunento endiyilindele ngaphambili.
Nangona i-iron standard yokwenza i-CG16 isetyenziswe kwicala elomeleleyo-i-iron-7 ine-degrees ezingama-31 ze-loft-ingqwalasela eninzi ihlawulwe kwingqungquthela phakathi kwezo ndawo.
Kodwa kuthatha ukusetyenziswa xa uqala ukubetha iingcingo zakho.
Ukugquma kwinqwelo e-Cleveland CG16 isetyenzisiwe ididekile kuma-degrees ama-44. Oku kuthetha ukuba phantse idibanti ezimbini zeengcingo phakathi kwe-PW ne-SW. Into ekufuneka uyiqwalasele njengoko udayela kwiidali zakho.
Ngoko, ingabe iCleveland CG16 yesinyithi iya kuyenza ibe ngesikhwama sakho? Ukuba uzama iintsimbi ze-CG16, nawe, unokuzifumana unomdla wokude kunye nokuchaneka. Kwaye, e-galufu, ehamba nje.
Izixhobo Zakho Zokugcina Eziyimfuneko
Study Unit Unit - eHawaii
Yintoni i-ISI ye-Pakistan okanye i-Inter-Services Intelligence?
Ukuhlaziywa kweMatriki esheshayo
Amazwe amaninzi amaninzi namhlanje
I-Admissions yeYunivesithi yasePortland